က Norton လုံခြုံရေးနှင့် Antivirus ကို | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » လုံခြုံရေး & သီးသန့်လုံခြုံရေး Apps ကပ » က Norton လုံခြုံရေးနှင့် Antivirus ကို
က Norton လုံခြုံရေးနှင့် Antivirus ကို APK ကို
က Norton လုံခြုံရေး & Antivirus ကိုမိုဘိုင်းလုံခြုံရေးနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး app ကိုအနိုင်ရကာဆုချီးမြှင့်သည်။ ဒါဟာ  ထိုကဲ့သို့သောသင့်အချက်အလက်များကိုနှင့်ငွေခိုးယူဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲအန္တရာယ်ရှိသော app များ, ခိုးမှုနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များအဖြစ်ခြိမ်းခြောက်မှုများဆန့်ကျင်သင့်ရဲ့ Android device များကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကူညီပေးသည်။
အခမဲ့ Android ကိုလုံခြုံရေးအင်္ဂါရပ်များ
★က Android Antivirus ကို: စကင်ဖတ်နှင့် malware, spyware, သို့မဟုတ်သင့် device ကိုထိခိုက်စေသို့မဟုတ်နှေးကွေးနိုငျကွောငျးကို Android ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိသည်သော apps များကိုဖယ်ရှားကူညီ  ။
★က Wi-Fi ကိုစကင်: အများပြည်သူသုံး Wi-Fi ကိုချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာချိတ်ဆက်မှုမလုံခြုံလျှင်သင့်ရဲ့ device ကိုသင့်အားအကြောင်းကြားသဖြင့်ဘေးကင်းလုံခြုံနေဖို့ကူညီပေး
★ကို Safe Search ကို: In-app ကို search engine ကိုညာဘက်သင့်ရဲ့ရှာဖွေရေးရလဒ်များကိုအတွက်အလံမလုံခြုံက်ဘ်ဆိုက်များမှ Symantec ကရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခြိမ်းခြောက်မှုဒေတာဘေ့စချိတ်ဆက်
★ခေါ်ရန် Block သင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာ SPAM နှင့် junk ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု, သင်မလိုချင်တဲ့ပိတ်ဆို့ဖို့ခွင့်ပြု
★ပျောက်ဆုံးနေတဲ့နှင့်အခိုးခံရဖုန်းကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်သင့်ရဲ့ device ကို၏တည်နေရာခြေရာခံများနှင့်ဘက်ထရီအဆင့်အရေးကြီးသည်အခါနောက်ဆုံးလူသိများတည်နေရာကယ်တင်တော်မူ၏, နှိုးဆော်သံအသံ, ဒါမှမဟုတ်  သိ. သူတို့မရှိဘဲသင့်ရဲ့ device ကို အသုံးပြု. မည်သူမဆိုတစ်ဦး Sneak peek ဓာတ်ပုံကိုယူပြီး 
Premium အင်္ဂါရပ်များ (အခမဲ့ 30-Day ကို Trial1)
★ Wi-Fi လုံခြုံရေးအများပြည်သူ Wi-Fi ချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့ device ကိုဘေးကင်းလုံခြုံနေဖို့ကူညီပေးသည်။ တူညီသော Wi-Fi ကွန်ယက်ပေါ်တွင်အမည်မသိပါတီသင်၏အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုအပေါ်သူလျှိုလျှင်က Wi-Fi ကိုလုံခြုံရေးတစ်ဦး Man-in-the-Middle (MITM) တိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်လူသိများ, သတိပေး
★တစ်ဦးအဝင်ခေါ်ဆိုမှုဟာလူသိများပမ်သို့မဟုတ်လိမ်လည်မှုအရေအတွက်ကိုကနေအခါ Real-time သတိပေးချက်များကိုရယူပါနှင့်အလိုအလျောက်ခေါ်ဆိုခ (အမေရိကန်နှင့်သာအိန္ဒိယ) ပိတ်ဆို့
အန္တရာယ်ရှိတဲ့သွားရောက်ခြင်းနှင့်ဆိုဒ်များ phishing ဆန့်ကျင်သငျသညျကိုကာကွယ်ရန်ကူညီရန်အွန်လိုင်း surfing စဉ်★ Web ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပြည့်စုံလုံခြုံရေးကမ်းလှမ်း
★ Ransomware ကာကွယ်မှု detect ကူညီပေးသည်နှင့်သင့်မှာ Android device ကိုအပေါ်တက်ကြွစွာ ransomware တိုက်ခိုက်မှုများကိုရပ်တန့်ကူညီပေးသည်
★က Android System ကိုအကြံပေး: ဆိုက်ဘာခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့်ထိတွေ့သင်စွန့်ခွာနိုင်သောတိုက်ခိုက်မှုများ၏ရမှတ်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့သင့်ရဲ့ device ကိုနှင့် Android OS ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးကူညီပေး
★အဝေးမှ SIM ကဒ်ကိုဖယ်ရှားလျှင် 10 သော့ဖွင့်ကြိုးစားမှုမအောင်မြင်ခဲ့ပြီးနောက်သော့ခတ်အလိုအလျှောက်, ဒေတာသူခိုးကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့သင့်ပျောက်ဆုံးသို့မဟုတ်ခိုးယူဖုန်းကို lock မှ SMS ကို။ 
★သင့်ရဲ့ပုဂ္ဂလိကသတင်းအချက်အလက်များအားကာကွယ်ရန်ကူညီရန်အဝေးကနေတစ်ဦးပျောက်ဆုံးသို့မဟုတ်ခိုးယူ device ကိုရဲ့သတင်းအချက်အလက် Wipe
★ Sneak peek  က built-in ကင်မရာသင်က (သာ webcam-enabled devices များ) ပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်ခိုးယူစာရင်းပြုစုတစ်ချိန်ကသင့်ရဲ့ device ကို အသုံးပြု. မည်သူမဆိုတစ်ဦးဓာတ်ပုံကိုယူအသုံးပြု
★က Norton ™မိုဘိုင်းဝိပဿနာစွမ်းအားဖြင့် App ကိုအကြံပေးအလိုအလျောက်အလားအလာများအတွက် apps များကိုစစ်ဆေးနေ
privacy ကိုအန္တရာယ်များကိုမြင့်မားဘက်ထရီများနှင့်ဒေတာအသုံးပြုမှုသို့မဟုတ်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောအပြုအမူကို download မတိုင်မီ
★ကမ္ဘာပေါ်မှာပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဓာတ်ပုံများပေးပို့ apps ဘယ်မှာသီးသန့်လုံခြုံရေးအစီရင်ခံစာ Interactive မှမြေပုံပြသ
က Norton လုံခြုံရေး & Antivirus ကိုတက်ကြွသောဆန့်ကျင် malware, spyware နဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးသည်။
 လက်ရှိပရီမီယံက Norton မိုဘိုင်းလုံခြုံရေးကြေးပေးသွင်းခြင်းမရှိဘဲအသစ်သောအသုံးပြုသူများကိုပါ။ အဆိုပါပရီမီယံက Norton မိုဘိုင်းလုံခြုံရေးစမ်းသပ်မှုကာလဤမျှကာလပတ်လုံးလက်ရှိဗားရှင်းကို App store ကိုပေါ်ရရှိနိုင်ဖြစ်နေဆဲအဖြစ် 30 နေ့ရက်ကာလအဘို့ကြာရှည်ပါလိမ့်မယ်။ လိုအပ်သောအဘယ်သူမျှမခရက်ဒစ်ကဒ်သတင်းအချက်အလက်။ တရားခွင်ပြီးဆုံးတဲ့အခါမှာ, သင်လုံခြုံစွာသင့်ရဲ့ device ကိုစောင့်ရှောက်ရန်အခမဲ့ features တွေခံစားဖို့ဆက်လက်နိုငျပါသညျ!
 SMS ကို Lock ကို, SMS ကို SMS ကိုအော်သံ, SMS ကို Locate, Wipe နှင့်စာသားအကြာတွင်အန်းဒရွိုက် 4.4 သို့မဟုတ်ပေါ်တွင်မထောက်ပံ့ပိတ်ဆို့ခြင်း။
 Sneak peek ဂျာမနီမှာကိုမရရှိနိုင်ပါရှိပါတယ်။
 Android မှာ Multi-user mode ကိုမထောက်ပံ့ပါ။
 Google မှာ apps တွေရဲ့အော်တို scan က Android ကို 4.1 အပေါ်ထောက်ခံသို့မဟုတ်နောက်ပိုင်း Samsung ရဲ့ထုတ်ကုန်များအတွက် မှလွဲ. ကစား။ နောက်ပိုင်းတွင်ကို Android 4.2 running သို့မဟုတ်က Samsung Device များထောက်ခံနေကြသည်။
 AV စနစ်-စမ်းသပ်မှု, "အကောင်းဆုံး Android ကိုလုံခြုံရေး 2017, မတ်လ 2018": https://www.av-test.org/en/news/av-test-awards-2017-go-to-symantec/
http://norton.com/nms_support: တုံ့ပြန်ချက်များနှင့်အကြံပြုချက်များအဘို့, ထောက်ခံမှုဖိုရမ်သို့သွားရောက်
ကျနော်တို့ features အသစ်ပေါင်းထည့်ခြင်းနှင့်တိုးတက်မှုသင့် android device အဘို့ကြီးသောက Norton ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်တန်ဖိုးရောက်စေဖို့လုပ်ဆက်လက်ကြသည်!
•က Wi-Fi ကိုလုံခြုံရေးကာကွယ်မှုတိုးမြှင့်မှုများ - DNS spoofing နှင့်သံသယဖြစ်စရာကွန်ယက်ဟာ့ဒ်ဝဲအဘို့အက Man-in-the-အလယျပိုငျးခြိမ်းခြောက်မှု detection
• UI ကိုတိုးတက်မှု
23.83 ကို MB
မေလ 22, 2015 မှာ 11: 50 နံနက်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်က Norton antivirus ကို
မေလ 17, 2015 မှာ 8: 06 ညနေ
ကောင်းတဲ့ antivirus ကို။
နိုဝင်ဘာလ 6, 2014 မှာ 9: 16 ညနေ
အိုင်တီဗိုင်းရပ်စ်ပါဝါ FULL တိုက်ပွဲများကြောင့်အိုင်တီသိပ်ကောင်းပါတယ်။ သင် Norton ကျေးဇူးတင်ပါသည်
ဇူလိုင်လ 30, 2014 မှာ 12: 48 နံနက်
တကယ်တော့ဒါဟာအလွန် .................. Powerfull နှင့်ထိရောက်သောပါပဲ။
ဇူလိုင်လ 19, 2014 မှာ 10: 53 နံနက်
သေးကြိုးစားခဲ့ကြပြီမဟုတ်။ သို့သော်၎င်း၏အကြီးမျှော်လင့်ပါတယ် !! Nl
ဇူလိုင်လ 18, 2014 မှာ 9: 16 နံနက်
ဇွန်လ 21, 2014 မှာ 7: 29 ညနေ
ဒါဟာ andriod ဘို့အကောင်းတစ်က်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်။
ဇွန်လ 15, 2014 မှာ 11: 55 နံနက်
ဇွန်လ 5, 2014 မှာ 3: 05 ညနေ
ဒါဟာစမတ်ဖုန်းများနှင့် tab ကိုများအတွက်အကောင်းဆုံးင်
မေလ 25, 2014 မှာ 10: 39 နံနက်
မေလ 22, 2014 မှာ 8: 08 နံနက်
ငါသည်ကြီးမြတ်သော Norton ပန်ကာဖွစျပါ၏
Umakanta ဂီရိ says:
မတ်လ 8, 2014 မှာ 3: 30 ညနေ
ငါသည်ဤ app.It ကြောင့်မိုဘိုင်းဖုန်းဆွဲထား good.Because မဟုတ်ပါအသုံးပြုနိုင်သည်ငါ ......
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 27, 2014 မှာ 9: 33 နံနက်
Norton ကမ္ဘာပေါ်မှာ gaurd အကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်းကို antivairus ဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းတယ်။ i "အသုံးပြုပျော်ရွှင့်။
tiya vitaliz says:
ဒီဇင်ဘာလတွင် 3, 2013 မှာ 2: 12 နံနက်
နိုဝင်ဘာလ 11, 2013 မှာ 10: 39 နံနက်
webroot add နှင့် download ပြုလုပ်က်ဘ်ဆိုက်မှဟာ android များအတွက်အသေးစားမိုဘိုင်းလုံခြုံရေး Trends ။
နိုဝင်ဘာလ 1, 2013 မှာ 10: 18 ညနေ
ငါသည်ဤ antivirus ကိုဒါပေမယ့်စူပါ app များကိုအသုံးပြုနိုင်သည်ငါ
အောက်တိုဘာလ 2, 2013 မှာ 2: 57 ညနေ
နှင့်ဤ antivirus ကိုဒီ amazinz ဖြစ်ပါတယ် suprub ဖြစ်ပါတယ်
စက်တင်ဘာလ 22, 2013 မှာ 4: 28 ညနေ
စက်တင်ဘာလ 16, 2013 မှာ 10: 27 နံနက်
စက်တင်ဘာလ 12, 2013 မှာ 10: 46 ညနေ
က Norton ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးလုံခြုံရေးဖြစ်ပါသည်
Lee က P ကို ​​Wariok says:
ဇူလိုင်လ 20, 2013 မှာ 11: 55 နံနက်
မိုဘိုင်းအတွက်အသစ်တခုနေရဆဲ I'am နှင့်ဈဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမှငါ့မိုဘိုင်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်တယ်။
Virgil သော့ခတ် says:
ဧပြီလ 26, 2013 မှာ 3: 08 နံနက်
ကိုယ့်ကိုကြီးစွာသောက Norton ပန်ကာဖွစျ၏။